၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက် အတွဲပေါင်း ၅ဝ ?? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက် အတွဲပေါင်း ၅ဝ ??
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက် မျက်ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်အတွဲပေါင်း ၅ဝ၈၆ တွဲရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ယူရို ၄၃၉ ဒသမ ၃၅ သန်းရရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲစီမံရေးရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဇော်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီက နေပြည်တော် မဏိရတနာ ကျောက်စိမ်းခန်းမရှေ့ရှင်းလင်း ဆောင်တွင် ပြုလုပ်သည့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်ရောင်းချမှု အခြေအနေသတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၆၆၈၅ တွဲတင် ပြရောင်းချခဲ့ရာမှ ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၅ဝ၅၄ တွဲရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ယူရို ၄၃၈ ဒသမ ၅၈ သန်းရရှိခဲ့ ကြောင်း၊ ကျောက်မျက်အတွဲအနေ ဖြင့် အတွဲ ၁၉ဝ တင်ပြရောင်းချခဲ့ရာတွင် ၃၂ တွဲရောင်းချခဲ့ရပြီး ယူရို သုည ဒသမ ၇၇ သန်းရရှိခဲ့ ကြောင်း မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲစီမံရေးရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဇော်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခင် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် နှစ်လယ် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်း ၅၉၈၈ တွဲတင်ပြ ရောင်းချခဲ့ပြီး ၄ဝ၄၁ တွဲရောင်းချနိုင်ခဲ့ကာ ယူရို ၃၂၆ ဒသမ ဝ၂ သန်းရရှိခဲ့ပြီး ကျောက်မျက်အတွဲ ၄၃၉ တွဲတင်ပြရောင်းချခဲ့ရာ ၄၄ တွဲရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ယူရို ၁ ဒသမ ၆၇ သန်းရရှိခဲ့ကာ စုစုပေါင်း ကျောက်စိမ်းကျောက်မျက်အတွဲ ၆၄၂၇ တွဲတင်ပြခဲ့ပြီး ၄ဝ၈၅ တွဲ ရောင်းချနိုင်ကာ စုစုပေါင်းယူရို ၃၂၇ ဒသမ ၆၉ သန်းရရှိခဲ့သဖြင့် ယခု ၂ဝ၁၇ နှစ်လယ်ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲသည် ယခင် ၂ဝ၁၆ နှစ် လယ် ကျောက်မျက်ရတနာပွဲထက် ပိုမိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။
”ဘယ်ပွဲမှာမှ အတွဲတစ်ထောင် ရောင်းလို့ အတွဲတစ်ထောင်လုံးငွေရတယ်လို့ မရှိခဲ့ဘူး။ အဆိုပြုထားတဲ့ ကျောက်တွဲရဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်းပါမှ ဝယ်ယူခွင့်ပြုတယ်။ အခုရောင်းရတဲ့အတွဲပေါင်း ငါးထောင်ကျော် လုံးရောင်းဈေးရဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်းသည် ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရတယ်။ ပြည်ပဆိုရင် ယူရိုငွေ ၉၄ သန်းလောက် လက်ခံရရှိတယ်။ ပြည်တွင်းဆိုရှစ်သန်းလောက်ရတယ်။ အခြေအနေအကြောင်းအ မျိုးမျိုးနဲ့မရွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိတာပေါ့”ဟု စီမံရေးရာဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဇော်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းအ ခြေခံအမြင့်ဆုံးယူရိုဈေး ၅ ဒသမ ၈ သန်း နှစ်တွဲနှင့် ငါးသန်းတစ်တွဲ၊ စုစုပေါင်း သုံးတွဲပါဝင်တင်ပြထားသော်လည်း တစ်တွဲမျှရောင်း ချနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ယခုပွဲသို့ ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၆ဝဝ မှ ရတနာကုန်သည်ပေါင်း ၄၄၃၂ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး အများဆုံးတရုတ်နိုင်ငံမှ ရတနာကုမ္ပဏီ ၈၈၈ ခုမှ ကုန်သည် ၂၈၂၇ ဦးတက် ရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်း၏ပြောပြချက်အရသိရသည်။
ချိန်ဘာလိန် ဂိုးသွင်းစွမ်းရည် တိုးတက်လာမည် ဟု ကလော့ပ် ယုံကြည်
မိမိသွင်းယူသော ဂိုးဖြစ်သည်ကို ကျိန်တွယ်နိုင်ကြောင်း ဟယ်ရီကိန်း ဆို
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက်တောင် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ တစ်လအတွင်း ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုတွင် ၃၂ ဦးအဆ??